မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားသည့် သံဃာနှင့် ငွေအသပြာ အကြောင်း - Zet Star
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားသည့် သံဃာနှင့် ငွေအသပြာ အကြောင်း
သံဃာ့ဖခင်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်က မတားမြစ်ခဲ့တာကို ကိုယ့်ကျမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်မနေကြနဲ့။
(မင်းကွန်း တိပိဋက ဆရာတော်ကြီး၏ သြဝါဒ) တစ်ခါက ရန်ကုန် ပဉ္စနိကာယနိကာယ် စာမေးပွဲ စာအောင်ပူဇော်ပွဲ အတွက် သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများနှင့် အသင်းလူကြီးများ စည်းဝေးပွဲတွင် တိပိဋက ဆရာတော် ပခုက္ကူ ဦးနေမိန္ဒ-က စာအောင်သံဃာအား ပူဇော်ရာတွင် အပ်စပ်သော… စာအုပ်,သင်္ကန်း စသည်တို့ဖြင့်သာ ပူဇော်ရန်၊ မအပ်စပ်သည့် နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ဖြင့် မပူဇော်ရန် အကြံပြုပါသည်။
ထိုအခါ – မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ်တသာရာဘိဝံသ-က နဝကမ္မဝတ္ထုငွေဟာ စိတ်ထားတတ်သူတို့အတွက် အပြစ်က နည်းတယ်။ သာသနာအတွက် အကျိုးက များတယ်။ ဒါ့ကြောင့်…. သာသနာ အတွက် အကျိုးများရာကို ကြည့်ပြီး နဝကမ္မဝတ္ထုငွေနဲ့ ပူဇော်သင့်တယ် ဟူ၍… အောင်မြင်သော အသံဖြင့် ဓမ္မာရုံကြီး ဟိန်းသွားအောင် မိန့်တော်မူပါသည်။
ထို့နောက် ဆက်လက်၍- မင်းကွန်းမှာ ဘုန်းကြီးတို့ ငယ်စဉ်က မန္တလေးစာဝါလိုက်ဖို့ မြစ်ဆိပ်လာရင် ငှက်လှေသမားတိုင်းက “နိဗ္ဗာန်ကူးတို့” အလကား အခမဲ့ ပို့ကြတယ်။ မန္တလေးဘက်ရောက်တော့ စျေးချိုကို မြင်းလှည်းစီး “ဆယ်ပြား”ပေးရတယ်။ စျေးချိုမှ ဘုရားကြီး မြင်းလှည်းစီး ရတယ်။ “ဆယ်ပြား”ဘဲ။ ဘုရားကြီး “ဆတော်” (ဘုရားကြီး ဆရာတော် )ထံ စာဝါ လိုက် ပြန်တော့လဲ ဒီတိုင်းဘဲ။ ဒီလိုပိုက်ဆံ ကုန်ခံ စာဝါတွေလိုက်ခဲ့လို့ ဆရာနည်းတွေ၊ သာသနာပြုနည်းတွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။
ခုခေတ် – ဘယ်ငှက်လှေသမား၊ ဘယ်မော်တော်သမားကမှ အလကား အခမဲ့တင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဆို မော်တော်ခ၊ ကားခ-မရှိလျှင် ဦးဇင်းလေးတွေ အဝေးကို စာဝါမလိုက်ရလို့ ဆရာနည်းတွေ၊ သာသနာပြုနည်းတွေ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ မရလျှင်… သာသနာအတွက် အကျိုးတွေ အများကြီးလျော့မယ်။
“နိဿဂ္ဂိ”က တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကုစားလိုက်လျှင် မထိုက်တော့ဘူး။ ပိုက်ဆံကိုင်ရလို့ လူထွက် တာမဟုတ်ဘူး။ သာသနာမှာ သဒ္ဓါတရား အားနည်းလို့ လူထွက်တာ။ ဒီလို သာသနာအတွက် အကျိုးက-များပြီး အပြစ်က-နည်းလို့လည်း ဆတော်ဗုဒ် တို့ ဓမ္မကူးဆတော် တို့ ရွှေဥမင်ဆတော် တို့ မစိုးရိမ်ဆတော် တို့ လယ်တီဆတော် တို့ စတဲ့ ကိုယ့်ထက် စာတတ်တဲ့ အနေထိုင်ကောင်းတဲ့ “သံဃာ့ဖခင်ကြီး”တွေ ကိုယ်တိုင်က မတားမြစ်ခဲ့တာကို ကိုယ့်ကျမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်မနေကြနဲ့။ စာအောင်သံဃာတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် “နဝကမ္မ ဝတ္ထုငွေ”နဲ့ ပူဇော်ကြ့….ဟူ၍ အသံ ခပ်မာမာဖြင့် ယတိပြတ် မိန့်ခဲ့ပေသည်။
ထို့ကြောင့် နိဿဂ္ဂိထိုက်သည် ဆိုသည်မှာ- စာသင်သားရဟန်း သံဃာတော်များအတွက် ပါရာဇိက ကျခြင်း မဟုတ်။ ကုစား၍ ရသော အရာဖြစ်သည်ဟု ဗဟုသုတရပြီး သာသနာအကျိုးအတွက် ငဲ့ကွက် ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေသော်ဝ်။
← ဘွဲ့ဆိုတာ အဆင့်အတန်းတခုလား? ဘွဲ့ရတာနဲ့ အဆင့်အတန်း မြင့်သွားရောလား (ဘွဲ့ရပညာတတ်နဲ့ ငါးစိမ်းသည်)
တာချီလိတ်တွင် လမ်းခင်းကျောက်ထဲ ရွှေများပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ လူအများအပြား လာရောက်ကောက်ယူနေ →
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ အလုပ်တွေကို တသက်လုံး လုပ်သွားကြမှာလား?